ARTEC: Laharam-pamehana ny fifehezana ny rindram-baiko SMS4CD. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE ARTEC: Laharam-pamehana ny fifehezana ny rindram-baiko SMS4CD.
A LA UNEACTUALITESOCIALTECHNOLOGIE
ARTEC: Laharam-pamehana ny fifehezana ny rindram-baiko SMS4CD.
By Nirinajan 26, 2017, 21:17 0
Nampiroborobo ny fampiasana ny “radiocommunication” ny fivoaran’ny teknolojia nifanesisesy. Mitaky fahaiza-mampiasa mifehy ireo rindram-baiko momban’ny « spectre de fréquence radioélectrique » anefa izany. Mila ampiana tosika amin’ny alalan’ny fampiofanana noho izany ireo tomponandraikitra mikirakira azy ity. Mandritra ny dimy andro dia hozaraina amin’izy ireo ny fahaizana mifehy ny rindram-baiko SMS4DC natokana ho an’ny fitantanana ny « spectre » eto amin’ny firenena mandroso. Ny ratsamangaika mahefa momban’ny fanomezana fahazoan-dalana mampiasa ny teknolojia sy ny fifandraisana ARTEC no mikarakara ny atrika asa fampiofanana miaraka amin’ny fanampian’ny Birao Iraisam-pirenena misahana ny fampiroboroboana fikirakirana ny fifandraisan-davitra.
«Rindram-baiko amin’ny vidiny mirary kanefa ahafahana mitantana amin’ny « spectre de fréquence » amin’ny fomba mahomby ny SMS4DC ». Miantoka ny tsy fisian’ny « brouillages » ao anatin’ny asan’ny fifandraisan-davitra ihany koa izy ity.
Ankoatra izany, horesahana ao anatin’ny fivoriana arahina fampiofanana ny tetikasa vaovao mikasika ny fampiasana fomba fanisana ny sarany sy ny vola aloa amin’ny « fréquence radioélectrique ».
Nanomboka ny 23 janoary ny fampiofanana ary hifarana rahampitso izany.
Previous PostVITRINE ECONOMIQUE TOAMASINA: “Ho fototry ny fampandrosoana ny faritra Atsinanana”. Next PostSECOURS ISLAMIQUE FRANCE : MILOFO, tetikasa fampidirana ny ankizy an-tsekoly.